Booliska Kenya oo xiray qaar ka mid ah Xawaaladaha Soomaalida ee Nairobi – Beegsonews-Wararka maanta
Home WARARKA MAANTA Booliska Kenya oo xiray qaar ka mid ah Xawaaladaha Soomaalida ee Nairobi
Booliska Kenya oo xiray qaar ka mid ah Xawaaladaha Soomaalida ee Nairobi
Wararka ka imaanaya Magaalada Nairobi ee Caasimada Dalka ayaa sheegaya in Ciidamada Booliska Dalka Kenya ay Albaabada u labeen 5 Xawaaladood oo ay Soomaali ku la heyd Magaalada Nairobi ee Caasimada Dalka Kenya.
Xawaaladaha oo ku yaalla Xaafada Islii, ayaa la sheegay in ciidamo katirsan Booliska Kenya ay gudaha u galeen Xafiisyada Shirkadaha Xawaaladaha Soomaalida,isla markaana ay baarayaan.
Dowladda Kenya aya wado dhaqdhaaqyo iyo tallaabooyin ay suurato gal tahay inuu sii Xumaado Xiriirka ay la wadaagto Soomaaliya.
Dowladda Kenya ayaa Xalay Fiisaha Dal ku galka waxa ay u diiday Wasiiro iyo Xildhibaano katirsan Dowladda Soomaaliya,kuwaas oo maanta dib ugu soo laabtay Magaalada Muqdisho ee Caasimada Dalka Kenya.
Sidoo kale tallaabooyinka ay qadeyso Dowladda Kenya ayaa waxa ay u mooqtaa mid ay ugu dan lee dahay in lagu joojiyo Muran badeedka kala dhaxeeyo Soomaaliya,taas oo hataan dacwadeeda taalo Maxkamada Cadaaladda ee ICJ ee Dalka Holand.
Dowladda Kenya ayaa geed dheer iyo mid gaaban u fuuleysa sidii ay mar un ku hanan laheyd qeyb ka mid ah badeena Soomaaliya,balse arrintaasi ayaa waxa ka soo horjeeda,isla markaana difaacaya Madaxda Qarankenna Soomaaliya.
Previous articleNin Madaxweyne Trump Mobile Ku Tuuray Oo Xabsiga Xabsiga Loo Taxaabay
Next articleSawirro: Maxey kawada hadleen Axmed Madoobe iyo Francisco Madeira ?
Ayax dhibaato ku haya Degmooyin ka tirsan Gobollada Daad-madheedh iyo Togdheer
Guddoomiyaha Golaha Shacabka BFS oo qaabilay madax ka socotay hey’adda UNDP